ओली, दाहाल र भट्टराईको मिलन इण्डियन, यूरोपीयन र अमेरिकन गुहु मुत एउटै ठाउँमा घोले जस्तै ! - Top Nepal News
ओली, दाहाल र भट्टराईको मिलन इण्डियन, यूरोपीयन र अमेरिकन गुहु मुत एउटै ठाउँमा घोले जस्तै !
भरत दाहाल : राजनीतिक विश्लेषक -
इण्डियन भूमिका कमजोर पार्ने भूमिकाको समर्थन !
पश्चिमाहरूको हात बलियो पार्ने चालबाजिको विरोध !
स्वघोषित वामहरूको एकता र यसमा उपेन्द्र र हृदयेशको मोर्चाबन्दीलाइ षडयन्त्रकारि तत्वहरूले चस्नको प्रयासका रूपमा अपब्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यिनीहरूले आफूलाइ राष्ट्रवादी देखाउन चिनियाँ बुर्का ओढेर एन्टी इण्डियन सेन्टिमेन्ट देखाउने छन् भन्ने कुरामा मलाइ कुनै संका छैन तर यो हो यूरो अमेरिकन ध्रुविकरण ।
तराइको चुनावपछि इण्डयन दबदबा निकै कमजोर देखिन गएपछि यस्तो ध्रुविकरणको प्रयास भएको छ । राजपा बाहेक सबै मधेशीहरूलाइ पश्चमाहरूले किनि सकेका छन् । एमाले पश्चमा एनजिओहरूको सञ्जाल हो, बाबुरामको नाभि सिआइए ब्लकको रअ हो र पुष्पकमल पनि उतैको मिशनमा उठाइएका हुन्। यिनीहरूको निकटताको सूत्र यहि हो ।
इण्डियनहरूलाइ कमजोर बनाउन यिनीहरूले खेल्ने भूमिकालाइ विरोध गर्न आवश्यक देखिन्न । किनभने दलालहरूका बीचको झगडाबाट हुने फाइदालाइ उपयोग गर्नु पर्दछ । तर इण्डियनहरूलाइ देखाएर आफूलाइ राष्ट्रवादी देखाउने र विचारको महत्वलाइ मार्ने यिनीहरूको चालबाजिलाइ भने पर्दाफास गर्नु पर्दछ ।
देशभक्तहरूका लागि शिक्षाको अद्वितिय अवसर
साम्राज्यवादीहरूले इण्डियन, यूरोपीयन र अमेरिकन गुहु मुत एउटै ठाउँमा घोलेर नेपालमा राष्ट्रियता र देशभक्ति छैन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने र नेपाली राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाइ निर्णायक रूपमा ढाल्ने षडयन्त्रमा अघि बढाएका छन् ।
एमाले, एमाओवादी, बाबुराम, उपेन्द्र, हृदयेशका नाममा बनाइएको डम्पिङ साइट बाट फैलन सक्ने रोगको कुनै पनि मूल्यमा सामना गर्नुपर्छ । यो देशभक्तहरूका लागि शिक्षाको अद्वितिय अवसर हो । अब बाँकि बक्यौता भ्रमहरू फालेर एकजुट हुने अवसर सिर्जना भएको छ ।
शालिन पशु जगतलाइ सलाम
देशभक्तिको अभियान तुहिने छैन
भन्नलाइ यिनीहरूले भन्नेछन् परिस्थिति फेरियो, जिम्मेवारि बोध भयो, कांग्रेसले सबक सिकायो र पार्टी एकता गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यौं। यिनीहरूले यो पनि भन्नेछन् कि राजनीतिमा स्थायी शत्रुता भन्ने कुरा हुँदैन ।
यिनीहरू कांग्रेसभन्दा राम्रा न हिंजो थिए, न भोलि हुनेछन् । कांग्रेससंगै मिलेर देश लुटे, खरबौंको सम्पत्ति जोडे र विदेशी दलालका रूपमा देशको अस्मिता बेचे। कांग्रेससंगै मिले २० हजार नेपाली मारे ।
हिंजोसम्म एक अर्काको नजरमा कोहि खस नश्लवादी, कोहि राष्ट्रिय एकता विरोधि, कोहि जातिवादी, कोहि राष्ट्रवादी, कोहि राष्ट्रघाति, कोहि राष्ट्रिय एकताका विरोधि, कोहि तेश्रो लिंगि र कोहि पहिचान विरोधि थिए ।
यिनीहरूमध्ये कोहि मधेश विरोधि, कोहि मधेशवादी, कोहि गैरमार्क्सवादी नयाँ शक्ति, कोहि रअका एजेन्ट, कोहि कांग्रेसका पुच्छर, कोहि दिल्लीका घोडा, कोहि छौंडा, कोहि भगौडा र कोहि मोदीका कौडा थिए ।
साम्राज्यवादीहरूले नेपालमा राजनीतिक मूल्य र देशभक्ति भएका मानिस छैनन् भन्ने कुरा स्थापित गरेर नेपालीहरूको राष्ट्रिय मनोविज्ञान र मौलिक चिन्तनलाइ समाप्त पार्न धेरै कसरत गर्दै आएका छन् ।
यसको पहिलो प्रयोगका रूपमा नयाँ जनवादको खोलमा तिनीहरूले हत्केलाको माओवादीलाइ आकाशमा पुर्याएर पातालमा भासे र वर्गिय आन्दोलन उठ्नै नसक्ने गरी अविश्वास पैदा गर्न सफल भए ।
दोश्रो चरणमा यिनै दलालहरू मार्फत साम्प्रदायिकताको जहर ओकलेर समाजमा घृणाको बिउ रोपे र अब एमाले, एमाओवादी, नयाँ शक्ति, राजपा, फोरम सबैको गोबर ग्याँस प्लान्ट बनाएर देशभक्तिपूर्ण विचारका विरूद्धमा उर्जा निकाल्न खोजेका छन् ।
आज विहानसम्म एक अर्का विरूद्ध फेसबुकका भित्ता दूर्गन्धित बनाउँदै आएका यिनका नन्दिभृंगिहरूले जयकारको आवाज बुलन्द गर्नेछन् । हृदयेश त्रिपाठिको दिल्लीवाद, उपेन्द्रको बहुराष्ट्रवाद, एमालेको एनजिओवाद, बाबुरामको गैरमार्क्सवाद, पुष्पकमलको मिशिनरिवादबाट अग्रगामि छलाङ घोषणा गर्नेछन् ।
चेसको प्यादालाइ खेलाडिको औंलाले धकेलिन्छ। चुनाव जित्नका लागि पाइखानालाइ बेडरूम बनाए पनि मेरो टाउको दुख्दैन तर नेपालको राजनीतिलाइ साम्राज्यवादी योजनामा डम्पिङ साइट बनाउने यिनीहरूको कुत्सित चालबाट न देशभक्तहरू हडबडाउने छन् न त नेपाललाइ यिनीहरूको पञ्जाबाट मुक्त गर्ने अभियान नै छोड्ने छन् ।
यिनीहरूको चरित्र हेर्दा मलाइ पशु जगत कता हो कता बढि शालिन र सभ्य लाग्यो ।
पशु जगत सृष्टिले प्रदत्त गरेका मूल्यहरूबाट चलेको छ । मान्छेको अनुहारका नेपालका कुप्राणिहरू भन्दा श्रेष्ठ साबित भएको पशु जगतलाइ मेरो सलाम छ !